Miyeeysan mudneen in beesha Daarood loo duceeyo maanta? | allsanaag
Miyeeysan mudneen in beesha Daarood loo duceeyo maanta?
Qaar kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa u arka in beesha Daarood ay ahaayeen gumayste gumeesanayey beelaha kalle ee Soomaaliyeed. Tusaale, beesha Hawiye ayaa u arka General Caydiid inuu ahaa halyeey gumeeste Daarood ka xoreeyey Muqdisho.
Gumeesiga ma ahan wax sahlan, laakiin si dadka loogu Awr kacsado ayaa dhagaha loogu sheegay gumeesi in laga xoreeyay.
Dawladdii Daaroodka uu hoggaaminayey iyaga ayaa ku dulmanaa sababtoo ah qofka kasta oo Daarood ah waxaa la yiri waa inaad dhakhtarka Muqdisho u timaadaa, Jaamacdda u timaadaa Muqdisho, baasaboorka iyo diyaarada aad u soo raadsataa Muqdisho iyo wax kasta oo uu qofka u baahnaa.
Balse, Daarood inuu gumeeste ahaa iyo in kalle waxaa u marqaati kacday magaalada Muqdisho kadib markii kuwii lahaa gumeestaha ayaan kaa xoraynaynaa ay sida aboorkii kor iyo hoos uga dhax baxeen, dhiigii ka billawday daadintiisa Muqdisho 1991dii waa mid la istaajin la’yahay illaa waqtigan.
Hadaba, heestan amaanta ah waa mid lagu amaanayo dadkii dabka maanta gubanaya shiday? Miyeeysan mudneen in Daarood loo duceeyo maanta?
← Muqdisho iyo Maqaamkeeda Xarumaha Beelaha Muqdisho →